မန္တလေးခရိုင်မှာ ဓါးကိုင်ရမ်းကားနေသူများအား ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မန္တလေးခရိုင်မှာ ဓါးကိုင်ရမ်းကားနေသူများအား ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်
အသှငျယူဖမျးဆီးစဈဆေးဆောငျရှကျစဉျ မသင်ျကာဖှယျ လကျနကျကိုငျဆောငျသူမြားအား အရေးယူဆောငျရှကျ (၂၄-၂-၂၀၂၀ မှ ၁-၃-၂၀၂၀ အထိ)
မန်တလေးခရိုငျရဲတပျဖှဲ့နယျမွေ မွို့ပျေါ မွို့နယျ(၇)မွို့နယျအား ညစဉျ အထူးအဖှဲ့မြားခှဲ၍ ဒုစရိုကျ မှုခငျးမြား ဖျောထုတျနိုငျရေး အသှငျယူဖမျးဆီးအရေးယူဆောငျရှကျလကျြရှိရာ -
▪️၂၅.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ နံနကျ ၃ နာရီခှဲအခြိနျ အမှတျ(၈)မွို့မရဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ မောငျခမျြးမွတျ (၃၃)နှဈ၊ ကနျသာယာရပျကှကျ၊ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျနသေူ မောငျးနှငျလာသော MDY DD-xxxx AD VAN အဖွူရောငျယာဉျ အား မသင်ျကာသဖွငျ့ ရပျတနျ့စဈဆေးရာ ယာဉျနောကျခနျးအတှငျးမှ အရိုးအသှား(၂၇.၅) လကျမခနျ့ရှိ သတ်တုရိုးတပျဓါးဦးခြှနျ ဓါးရှညျ (၁)ခြောငျးအား တှရှေိ့သိမျး ဆညျးရမိ၍ လညျးကောငျး၊
▪️၂၅.၂. ၂၀၂၀ ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီခှဲအခြိနျ ပုသိမျကွီးမွို့မရဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ အရကျ သစောသောကျစားပွီး ဓါးကိုငျရမျးကားနသော သူရနိုငျ (၁၉)နှဈ၊ ပုဏ်ဏားကုနျးကြေးရှာ၊ ပုသိမျကွီးမွို့နယျနသေူထံမှ အရိုးအသှား (၁၃) လကျမခှဲရှိ ဓါးဦးခြှနျတဈခြောငျးနှငျ့ အရိုး အသှား(၁၉)လကျမရှိ ဓါးဦးခြှနျ(၁)ခြောငျးတို့အား တှရှေိ့သိမျးဆညျးရမိ၍လညျးကောငျး၊
▪️၂၅.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ ည ၈ နာရီအခြိနျ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့မရဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ ၅၈-မငျးကွီးရနျနောငျမီပှိုငျ့တှငျ မသင်ျကာဖှယျတှရှေိ့သူ သူရိနျထှနျး(ခ)အားနိုး (၂၈)နှဈ၊ ပွညျကွီး တံခှနျမွို့နယျနသေူထံမှ အရိုးအသှား (၁၁.၅) လကျမခနျ့ရှိ သတ်တုရိုးတပျဓါးဦးခြှနျဓါးမွောငျ (၁)ခြောငျးအား တှရှေိ့သိမျးဆညျးရမိ၍ လညျးကောငျး၊
▪️၂၆.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ ည ၉ နာရီအခြိနျ အောငျပငျလယျနယျမွရေဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျ မြားသညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ ၅၃-၅၄လမျးကွား၊ ယုဇနလမျး-သံလမျးကွားအရောကျတှငျ အရကျသစောသောကျစားမူးယဈနေ သော လှမျးမိုးသူ(၂၇)နှဈ၊ မွရညျနန်ဒာရပျကှကျ၊ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျနသေူထံမှ အရိုး အသှား(၁၈)လကျမခနျ့ရှိ ဓါးဦးခြှနျကငျဒိုဓါး(၁)ခြောငျး အား ကိုငျဆောငျရမျးကားနသေညျကို တှရှေိ့ဖမျးဆီးရမိ၍လညျးကောငျး၊
▪️၂၆.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီအခြိနျ အောငျပငျလယျနယျမွရေဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျ မြားသညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ ခမျြးမွ သာစညျမွို့နယျ၊ အောငျသာယာရပျကှကျ၊ တနျဖိုးနညျးအိမျရာရှေ့ လမျးမပျေါအရောကျတှငျ အရကျသစောသောကျစားမူးယဈနသေော ကြျောမြိုးနိုငျ(၂၄)နှဈ၊ ကလောမွို့၊ ရှမျးပွညျနယျ နသေူထံမှ အရိုးအသှား(၁၁)လကျမခနျ့ရှိ သုံးမွောငျ့စကဘော(၁)ခြောငျးအား ကိုငျဆောငျ ရမျးကားနသေညျကို တှရှေိ့ဖမျးဆီးရမိ၍လညျးကောငျး၊
▪️၂၇.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ ည ၉ နာရီ ၄၀ အခြိနျ မွဈငယျနယျမွရေဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျ သကျသမြေားနှငျ့ အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ ရှားတော လေးကြေးရှာ၊ တနျပိုဂိတျအနောကျဘကျ ရနျ-မနျးလမျးပျေါတှငျ လူတဈဦးဓါးကိုငျရမျးကား နသေော ဖိုးစီ(၃၇)နှဈ၊ အုနျးခြောကြေးရှာ၊ ပုသိမျကွီးမွို့နယျနသေူထံမှ သဈသားရိုးတပျအရိုး အသှား(၁၃)လကျမခနျ့ရှိ ဓါးဦးခြှနျ (၁)ခြောငျးအား တှရှေိ့သိမျးဆညျးရမိ၍လညျးကောငျး၊
▪️၂၈.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီ ၀၅ အခြိနျ အမှတျ(၉)မွို့မရဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ နယျမွအေတှငျးလှညျ့ကငျးတာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ လမျး-၆၀x၄၂ လမျးထောငျ့တှငျ လမျး ၆၀ အတိုငျး တောငျမှမွောကျသို့ မောငျးနှငျလာသော ၆၅ယ/xxxxx Honda Click အနီရောငျဆိုငျကယျအား မသင်ျကာသဖွငျ့ရပျတနျ့စဈဆေးရာ ဆိုငျကယျ မောငျးနှငျလာသူ စညျသူ(ခ)စညျသူအောငျ(၂၂)နှဈ၊ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျနသေူ ထံမှ အရိုးအသှား(၁၀)လကျမခနျ့ရှိ ခှေးသှားစိတျပါစတီးခေါကျဓါးခြှနျ(၁)ခြောငျး အား တှရှေိ့ သိမျးဆညျးရမိ၍လညျးကောငျး၊
▪️၂၆.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့ ည ၈ နာရီအခြိနျ အမှတျ(၇)နယျမွရေဲစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျ ဓါးကိုငျဆောငျရမျးကားနကွေောငျးသတငျးအရ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ၊ သံလကျြမှျော အရှရေ့ပျကှကျအတှငျး သကျသမြေားနှငျ့အတူ သှားရောကျဖမျးဆီးရာ ဓားကိုငျရမျးကားနေ သော အောငျပွညျ့ဖွိုး(ခ)ဘောကွီး(၂၆)နှဈ၊ သံလကျြမှျောအရှရေ့ပျကှကျ၊ မဟာအောငျမွေ မွို့နယျနသေူထံမှ အရိုးအသှား(၂၂)လကျမခှဲခနျ့ရှိ သဈသားရိုးတပျဓါးရှညျ(၁)ခြောငျးအား တှရှေိ့သိမျးဆညျးရမိ၍လညျးကောငျး၊
သကျဆိုငျရာရဲစခနျးတှငျ လကျနကျဥပဒပေုဒျမ ၁၉(င)အရ အသီးသီးအမှုရေးဖှငျ့ဆောငျရှကျ ခဲ့ကွောငျးသတငျးရရှိပါသညျ။
အသွင်ယူဖမ်းဆီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်စဉ် မသင်္ကာဖွယ် လက်နက်ကိုင်ဆောင်သူများအား အရေးယူဆောင်ရွက် (၂၄-၂-၂၀၂၀ မှ ၁-၃-၂၀၂၀ အထိ)
မန္တလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နယ်မြေ မြို့ပေါ် မြို့နယ်(၇)မြို့နယ်အား ညစဉ် အထူးအဖွဲ့များခွဲ၍ ဒုစရိုက် မှုခင်းများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး အသွင်ယူဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ -
▪️၂၅.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီခွဲအချိန် အမှတ်(၈)မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သက်သေများနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် မောင်ချမ်းမြတ် (၃၃)နှစ်၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသော MDY DD-xxxx AD VAN အဖြူရောင်ယာဉ် အား မသင်္ကာသဖြင့် ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်နောက်ခန်းအတွင်းမှ အရိုးအသွား(၂၇.၅) လက်မခန့်ရှိ သတ္တုရိုးတပ်ဓါးဦးချွန် ဓါးရှည် (၁)ချောင်းအား တွေ့ရှိသိမ်း ဆည်းရမိ၍ လည်းကောင်း၊
▪️၂၅.၂. ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲအချိန် ပုသိမ်ကြီးမြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သက်သေများနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် အရက် သေစာသောက်စားပြီး ဓါးကိုင်ရမ်းကားနေသော သူရနိုင် (၁၉)နှစ်၊ ပုဏ္ဏားကုန်းကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်နေသူထံမှ အရိုးအသွား (၁၃) လက်မခွဲရှိ ဓါးဦးချွန်တစ်ချောင်းနှင့် အရိုး အသွား(၁၉)လက်မရှိ ဓါးဦးချွန်(၁)ချောင်းတို့အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိ၍လည်းကောင်း၊
▪️၂၅.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သက်သေများနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ၅၈-မင်းကြီးရန်နောင်မီပွိုင့်တွင် မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိသူ သူရိန်ထွန်း(ခ)အားနိုး (၂၈)နှစ်၊ ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ်နေသူထံမှ အရိုးအသွား (၁၁.၅) လက်မခန့်ရှိ သတ္တုရိုးတပ်ဓါးဦးချွန်ဓါးမြောင် (၁)ချောင်းအား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိ၍ လည်းကောင်း၊
▪️၂၆.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီအချိန် အောင်ပင်လယ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် သက်သေများနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ၅၃-၅၄လမ်းကြား၊ ယုဇနလမ်း-သံလမ်းကြားအရောက်တွင် အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်နေ သော လွှမ်းမိုးသူ(၂၇)နှစ်၊ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်နေသူထံမှ အရိုး အသွား(၁၈)လက်မခန့်ရှိ ဓါးဦးချွန်ကင်ဒိုဓါး(၁)ချောင်း အား ကိုင်ဆောင်ရမ်းကားနေသည်ကို တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိ၍လည်းကောင်း၊
▪️၂၆.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန် အောင်ပင်လယ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် သက်သေများနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ချမ်းမြ သာစည်မြို့နယ်၊ အောင်သာယာရပ်ကွက်၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာရှေ့ လမ်းမပေါ်အရောက်တွင် အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်နေသော ကျော်မျိုးနိုင်(၂၄)နှစ်၊ ကလောမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် နေသူထံမှ အရိုးအသွား(၁၁)လက်မခန့်ရှိ သုံးမြောင့်စကေဘာ(၁)ချောင်းအား ကိုင်ဆောင် ရမ်းကားနေသည်ကို တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိ၍လည်းကောင်း၊
▪️၂၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ ၄၀ အချိန် မြစ်ငယ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သက်သေများနှင့် အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရှားတော လေးကျေးရွာ၊ တန်ပိုဂိတ်အနောက်ဘက် ရန်-မန်းလမ်းပေါ်တွင် လူတစ်ဦးဓါးကိုင်ရမ်းကား နေသော ဖိုးစီ(၃၇)နှစ်၊ အုန်းချောကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်နေသူထံမှ သစ်သားရိုးတပ်အရိုး အသွား(၁၃)လက်မခန့်ရှိ ဓါးဦးချွန် (၁)ချောင်းအား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိ၍လည်းကောင်း၊
▪️၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၀၅ အချိန် အမှတ်(၉)မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သက်သေများနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် လမ်း-၆၀x၄၂ လမ်းထောင့်တွင် လမ်း ၆၀ အတိုင်း တောင်မှမြောက်သို့ မောင်းနှင်လာသော ၆၅ယ/xxxxx Honda Click အနီရောင်ဆိုင်ကယ်အား မသင်္ကာသဖြင့်ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်လာသူ စည်သူ(ခ)စည်သူအောင်(၂၂)နှစ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်နေသူ ထံမှ အရိုးအသွား(၁၀)လက်မခန့်ရှိ ခွေးသွားစိတ်ပါစတီးခေါက်ဓါးချွန်(၁)ချောင်း အား တွေ့ရှိ သိမ်းဆည်းရမိ၍လည်းကောင်း၊
▪️၂၆.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် အမှတ်(၇)နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ဓါးကိုင်ဆောင်ရမ်းကားနေကြောင်းသတင်းအရ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ သံလျက်မှော် အရှေ့ရပ်ကွက်အတွင်း သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်ဖမ်းဆီးရာ ဓားကိုင်ရမ်းကားနေ သော အောင်ပြည့်ဖြိုး(ခ)ဘောကြီး(၂၆)နှစ်၊ သံလျက်မှော်အရှေ့ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်နေသူထံမှ အရိုးအသွား(၂၂)လက်မခွဲခန့်ရှိ သစ်သားရိုးတပ်ဓါးရှည်(၁)ချောင်းအား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိ၍လည်းကောင်း၊
သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် လက်နက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(င)အရ အသီးသီးအမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။